ကြာကူလီ – Achit University
အပြစ်ရှိသလိုတော့ ခံစားရတယ်……..။ ခက်တာက စော်ကြီးကိုလည်း သနားတယ်………………… တကယ့် အကိတ်ကြီးဗျာ……..။ သူနဲ့ ကျနော်တို့ကလည်း အရွယ်ချင်းက သိပ်မတိမ်းမယိမ်းဆိုတော့ ပိုပြီး ပြစ်မှားမိတာပေါ့…..။ အဲဒီအကျိုးဆက်က နောက့်နေ့တွေ မနက်ခင်းပိုင်း အတန်းပျက်တော့တာဘဲ…………. တပါတ်ကျေ်သွားတော့………
သူငယ်ချင်းတွေက ကျောင်းသုံးရက် ပိတ်တယ်ဆိုပြီး….. အိမ်ပြန်ကျတယ်….. ကျနော်ကတော့ ဝေးလို့ မပြန်တော့ဘူး…………..ညနေစောင်းမှာ သူ့ယောက်ျားက အထုပ်တွေနဲ့ အပြင်ထွက်သွားတာ တွေ့တယ်………… အစ်မ………………. အစ်ကို ဘယ်သွားတာလည်း ဆိုတော့…….. သူ့အဖေ ဆေးရုံ တက်ရမယ်ဆိုလို့ သွားစောင့်ပေးမလို့တဲ့…….. အစ်မကော မလိုကိဘူးလားဆိုတော့…….ဆိုင်က ပိတ်လို့ မရဘူးလေ..
ဒါနဲ့ ညနေစောင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ဘူတာကြီး လိုက်ပို့ပြီး……….ကျေန်ာလည်း ပြန်လာ…… ကျောင်းက သုံးရက် ပိတ်လိုက်တယ် ဆိုတော့………ရွာထဲမှာ လူရှင်းသွားပြီလေ……..။ သူ့ဆိုင်ထဲ ၀င်ရင်း အစ်မ……..ဘာဇတ်ကား ကောင်ားလေးတွေ ရှိလည်းဗျာ……….. နင်က ဘာကားကြည့်ချင်တာလည်း…………ဆင်းရဲသားကားကို မေးတာလား…… သူ့ဘက်က ဖွင့်ပြောပြီ ဆိုတော့လည်း ကိုယ်ဘက်ကလည်း ပွင့်လင်းရတာပေါ့ဗျာ………။
အင်းပေါ့…..အစ်မလည်း သိတဲ့ အတိုင်း ညတိုင်း ဂွေကိုင်နေရတာ……….. ဖီးလ်တက်မယ့် ဟာလေးတွေ ရှိရင် ပိုကောင်းတာပေါ့……. ဒီမှာက video ရုံမှာ သွားကြည့်ရတာဆိုတော့ သိပ်ပြီး လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ မရဘူးလေ…… အိမ်မှာဆို အေးဆေးဘဲ………ကြည့်ရင်း ဂွေလှိမ်…………အရမ်း အရသာ ရှိတာဆိုတော့……… ဟယ်…..ဒါဆို ငါ့ဆီမှာ လာကြည့်……………. နင့်အစ်ကိုလည်း မရှိတော့……..ငါလည်း ပျင်းနေတာ……………. ပြီးရော…….အစ်မ ဆိုင်ပိတ်ရင် ၀င်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးးးးးးးးပြန် လာခဲ့တယ်…….။
ကျနော်လည်း အကြံတော့ ပိုင်ပြီ ဆိုပြီး ထမင်းစောစောစား……… ကြက်သံလေးတောင် သောက်လိုက်သေးတယ်…. ပြီးတော့………. သူ့ဆီ မသွားခင်……… အရက်ဆိုင် ပြေးပြီး……..အာမီရမ် လေးပက်လောက် မကျည်းလေးနဲ့ စပ်ပြီး ကိုင်ထားတော့ လူက ရီဝေေ၀နဲ့…….. သူတို့ နောက်ဖေးပေါက်က တခါံးခေါက်တော့ အစ်မက တံခါးလာဖွင့်တယ်……….။ ထမိန်ရင်ရှားလေးနဲ့……….. ခုမှ ရေချိုးပြီးတာတဲ့……။ ပြီးတော့ ပြုံးစိစိနဲ့…ပြောတယ် နင်ကော ငါတို့ လင်မယားကို လာချောင်းတဲ့ထဲ ပါလားတဲ့…………… အွမ်……………မပါပါဘူး……အစ်မက ဘယ်လိုလုပ် သိတာလည်း ဆိုတော့ သူက ထရံကို လက်ညိုးထိုးပြတယ်………. ဘယ်ကောင်က ထရံပေါက်ကို ဆေးလိပ်မီးနဲ့ ချဲ့သွားလည်း မသိဘူး………။
သူက ပြောသေးတယ်…………. ဟိုတရက်ကလည်း ငါထလာတော့ ……ဟိုကောင်တွေ ပြေးတာ.. ဘယ်သူလည်း မသိဘူး….ဖိနပ်ကျွတ် ကျန်ခဲ့တယ်တဲ့………..။ ကျနော်လည်း ချော်လည်း ရောထိုင်ပေါ့……. ဟိဟိ ဆိုပြီ ရီနေလိုက်တယ်……… နင်ကြည့်ချင်တာ အရင်ကြည့်ထားတဲ့… ငါ သနပ်ခါးလိမ်းလိုက်အုံးမယ် ဆိုပြီး. သနပ်ခါးသွေးနေတယ်…..။ အစ်မ……….ဇတ်ကားက ဘယ်မှာလည်း ဆိုတော့…………… အောက်စက်ရဲ့ အောက်က အံဆွဲထဲမှာ အဲဒီကားတွေချည်းဘဲတဲ့….ဘာစာမှ မရေးထားတဲ့ ကားတွေ တခွေစမ်းထည့်ကြည့်လိုက်တယ်…
အဲဒီတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ………. half ကားလေး ဥစ္စာစောင့် သုံးဖော်…တရုတ်ကား…………… လီး အရမ်းတောင်တဲ့ တရုတ်ကားပေါ့.မင်းသမီးတွေက အရမ်းချောတာကိုး…..။ ကြည့်နေ၇င်း လီးက တောင်လာလို့ ဂွေလှိမ့် မလို့ပြင်နေတုန်း…….. မောင်လေး………. ခဏလာအုံးတဲ့ အစ်မ ကျောလေး……….သနပ်ခါး လူပေးစမ်းပါ………. ဟုတ်အစ်မ…………ဆို သူ့ဆီ ပြေး…..သူ့နောက်မှာ ထိုင်ရင်း သနပ်ခါး လိမ်းပေးမယ်ဆိုတော့ ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက်တာ.နောက်ကနေ နို့အုံကြီးတွေ ဆွဲချင်လိုက်တာဗျာ……… စားရမှ ဆိုတာ သိနေတော့ အောက်က ကောင်လေးက လည်း ခေါင်း တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့………။
သူ့အသားလေးတွေကလည်း ကိုင်လို့ ကောင်းတယ်ဗျာ………။ သနားခါး လူးပေးပြီးတော့………… စော်ကြီးက…………… သွားကြည့်တော့ ရပြီတဲ့……… ရှေ့မှာတော့ မပန်းနဲ့နော်တဲ့…………….. ငါ့ယောကျာ်းပြန်လာရင် ရိပ်မိနေအုံးမယ် ဆိုပြီး……. ကျေနျာ်လည်း ဇတ်ကားပြန်ကြည့်နေတုန်း…………. သူက ၀င်လာပြီး ဘေးနားမှာ ထိုင်ကြည့်တယ်…………။ အစ်မကော…………..အမြဲတမ်းကြည့်လားဆိုတော့……. ဟဲ့ကြည့်တာပေါ့ဟဲ့…….. ငါလည်း လူဘဲ…….. နင်အစ်ကိုက အဲဒီလို ကား အရမ်းကြိုက်တာ……………။
လုပ်ရင်သာ အဖြစ်မရှိတာတဲ့……..။ ကြည့်ရတာ သူ့ယောက်ျားက ဂွင်းကျိုးသွားတာ ဖြစ်မယ်…………….. ဂွင်းထုတာ များသွားရင် မိန်းမကို တကယ် လိုးတဲ့ အခါ ခဏလေး ပြီးသွားတယ်……………။ ဂွင်းကျိုးတဲ့ ကောင်တွေက ……ဂွေးလည်း သိမ်သွားတယ်….။ ဇတ်ကား ဆက်ကြည့်နေရင်း ဟိုပြောသည်ပြောနဲ့ သူ့ကို အခုမှ သေချာကြည့်တော့ ……..ဂါဝန်……. အောက်မှ ဘာမှလည်း မပါဘူး…….. ကျနော် စိုက်ကြည့်နေတာ တွေ့တော့………… စော်ကြီးက…………. နင်ကလည်း ငန်းလိုက်တာ….ဗွီဒီယိုကြည့်နေရင်းနဲ့တောင်……. ငါ့လာငန်းနေသေးတယ်ဆိုပြီး ငေါက်တော့…. ကိုယ်လည်း ခေါင်းလေး ကို ဗွီဒီယိုဘက် ပြန်လှည့်ပေါ့ဗျာ………..။
ခဏနေတော့ သူက ဘေးလာထိုင်ပြီး……………နင့်ဟာပြစမ်းတဲ့…. ပုဆိုးထဲမှာထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့…………. ငါကြည့်ကြည့်မယ် ဆိုလို့ ပုဆိုး လှန်ပြလိုက်တော့…………. သူက…………….အင်းထင်တဲ့ အတိုင်းဘဲတဲ့ နင်ခြေမက အကြီးကြီးဆိုတော့ ………….လီးကလည်းကြီးတာပေါ့ ဆိုပြီး……ဆွဲကိုင်ပြီး ထုပေးတယ်ဗျာ………. ကောင်းလိုက်တာဗျာ………….အရင်က ချဖူးတာက ဖာတည်မတွေ ဆိုတော့…….တေ့သွင်းလေ အခုက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ စော်ကြီးက ထုပေးတာဆိုတော့ အရှင်လတ်လတ် နတ်ပြည်ရောက်သလိုဘဲ……..
ကျန်ာလည်း အဲဒါနဲ့…….အစ်မကိုလည်း ဗွီဒီယိုထဲကလို လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့………..စောကြီးက……သက်ပြင်းချရင်း အင်းတဲ့………………။ ကိုယ်လည်း အခွင့်အရေး ရတုန်း ပညာပြမယ်ဆိုပြီး……..ကြည့်ဖူးတဲ့ ဇတ်ကားတွေထဲက အတိုင်း……….. လျှာနဲ့ အပြားလိုက် လျက်လိုက်……….အစိလေးကို ငုံပေးလိုက် လက်ညိုးလေးနဲ့ အဖုတ်လေးထဲ ထည့်လိုက်………….ကလေးများ ကစားစရာ အသစ်ရသလိုဘဲ……… ကျနော်လည်း ကောင်းကောင်းမှ အမှုတ် မခံဘူးတာ……..ပြီးတော့မယ် ဆိုတော့ …..စော်ကြီးက ရတယ်တဲ့. ငါ့ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးလိုက်ဆိုတော့……….
အစ်မ မြန်မြန်…………ပြီးတော့မယ် သူလက်ကလည်း သွက်လိုက်တာဗျာ…………..ကိုယ်လည်း ခါးကြီး ကော့ထိုးပြီး ပြီးလိုက်တယ်…..။ ငါသိတယ်.နင်ချက်ခြင်း တက်လုပ်ရင် ခဏလေ ပြီးမှာ ဆိုးလို့ အခုလို ပြီးခိုင်းလိုက်တာတဲ့……..။ လူပျိဘဲဗျာ……သွေးကလည်း တက်စ အချိန်…အာမီရမ် နဲ့ ကြက်သံကလည်း ကူထားတော့ ငါးမိနစ်တောင် မကြာဘူး……….. ဒုတ်ကြီးက မာလာတာ……….။
ဆောကြီး အဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးရင်…..သူက နင်လုပ်လို့ရရင် တက်လုပ်တော့ဟာ ငါ အထဲက ယားနေပြီတဲ့……………အားရပါးရ လုပ်ဆိုပြီး ပက်လက် လှန်ပေးတော့…… ကိုယ်ကလည်း…….. ထည့်တာဗျာ.အသုံးမကျချက်……… တော်တော်နဲ့ မ၀င်တော့ …စော်ကြီး က စိတမချည်ဘူး……သူ့လက်နဲ့ တည့်ပေးမှဘဲ ၀င်တော့တယ်……… သူ့ဘဲဟာက သေးသေးလေး ဆိုတော့ …………ဖာသည်မတွေနဲ့တော့ မတူဘူး………တော်တော် လိုးလို့ ကောင်းတာဗျ ကျနော်လည်း ဖြေးဖြေးချင်း လိုးလိုက်……… အားရပါးရ ဆောင့်လိုက်နဲ့………. ပုံစံ အမျိုးမျိုး လိုးခိုင်းတယ်ဗျာ……….။
သူက ပြီးခါနီးရင် အပေါ်က တက်ဆောင့်မှ အားရတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်အကြိုက်ပေါ့…………။ ဆောင်ကြောင့်ထိုင်ပြီး………ဒစ်ကို ပွတ်ဆွဲသွားတာများဗျာ……ကျောတောင် ကော့သွားတယ်…… အရသာပေါင်းစုံ…ဘဲ………. မှတ်မှတ်ရရ………. ဆယ်နာရီခွဲထိ …….နှစ်နှာရီ တွင်းကို ငါးချီလောက် လိုးဖြစ်တယ်….။ ဆော်ကြီးက ဗြောင်ဘဲ…ငါတော့ ယောက်ျားနဲ့ လိုးရင် အယားတောင် မပြေဘူးတဲ့.. နင်လီးနဲ့မှ ဘဲ ပြီးတော့တယ်…………မနက်ဖြန်လည်း လာလိုးပေးအုံးဆိုတော့………….. ကိုယ်လည်း အချိပေါ် သကာလောင်းနဲ့ မျက်နှာနဲ့ အဆောင်ပေါ် ပြန်တက်လာခဲ့ရတယ်…..။
သူ့ဆိုင်မှာ အိပ်လို့ မဖြစ်သေးဘူး….တခါတလေ….ရွာထဲမှာက ညဘက်ကြီးလည်း အခွေဌားချင်ရင် ဆိုင်က မီးလင်းရင် တံခါးလာခေါက်ပြီး ဌားတဲ့ တွေလေ………….။ ကိုယ်လည်း အဆောင်ပေါ်ရောက်တော့ စားမြုံ့ပြန်ပြီး..အိပ်လိုက်တာတချိုးတည်းဘဲ………. ။ ပြီးပါပြီ………. Credit